Có nên mua máy ảnh giá rẻ? Top 10 máy ảnh tốt giá rẻ nhất 2020 | Muasalebang - Muasalebang
Có nên mua máy ảnh giá rẻ? Top 10 máy ảnh tốt giá rẻ nhất 2020 | Muasalebang
Đang Đọc: Có nên mua máy ảnh giá rẻ? Top 10 máy ảnh tốt giá rẻ nhất 2020 | Muasalebang in Muasalebang
Abantu abaningi bayathanda ukuthatha izithombe, kodwa ngenxa yokuthi izimo zezomnotho azivumi, bayesaba ukuthenga ikhamera eshibhile ngeke ibe sezingeni elifanayo nele-premium. Ngoba kubasebenzisi abaningi, bahlala becabanga ukuthi “okushibhile okwami”.
Kodwa ingabe kuyiqiniso ukuthi noma iyiphi ikhamera enenani eliphansi ingeyekhwalithi embi? Kanye ne-Chantuoi.com, ingabe kufanele uthenge ikhamera eshibhile? futhi bancome amakhamera ebhajethi ekhwalithi ephezulu.
1 Kufanele ngithenge? ikhamera eshibhile azizona?
2 Indlela yokukhetha ikhamera eshibhile yekhwalithi enhle
2.1 Uhlu olugcwele lwezindlela zokulungisa
2.2 Impahla, ingqikithi ikhamera eshibhile
2.3 Idizayini ikhamera eshibhile
2.4 Yiziphi izesekeli eziza nekhamera eshibhile?
2.5 Uphawu lokuhweba
3 Amakhamera ashibhile aphezulu ayi-10 namuhla
3.1 1. ICanon PowerShot SX620 – ikhamera engcono kakhulu engaphansi kwezigidi ezi-5
3.2 2. Canon PowerShot SX430 . Ikhamera
3.3 3. Ikhamera yeCanon IXUS 185 – Ikhamera eshibhile ngaphansi kwe-VND eyizigidi ezi-3
3.4 4. ICanon IXUS 190. Ikhamera
3.5 5. I-Fujifilm Instax Mini LiPlay Ikhamera Esheshayo
3.6 6. Ikhamera eshibhile yakwaSony DSC W810
3.7 7. Ikhamera ye-Sony DSC H300
3.8 8. Ikhamera ye-Sony DSC W830
3.9 9. I-Sony DSC-WX220 . Ikhamera Yedijithali
3.10 10. Ikhamera ye-Sony DSC-H400
Kufanele ngithenge? ikhamera eshibhile azizona?
Impela Kulungile. Amakhamera adumile, ashibhile namuhla ngokuvamile awela ebangeni le-1- 6 million, evame kakhulu isuka ku-3-5 million. Wonke anemisebenzi eyisisekelo okufanele ikhamera ibe nayo.
Nazi izimo lapho ikhamera enenani eliphansi ingathengwa khona:
Ukuthwebula izithombe kwabaqalayo: Kuleli qophelo, udinga ukuqonda amapharamitha wokulungisa wekhamera futhi uzilolonge ngemisebenzi embalwa eyisisekelo yokuthwebula ngaphambi kokuthuthukela kukhamera ebizayo. Kodwa uma uthenga ikhamera ebizayo okokuqala uyisebenzisa, ngeke ukwazi ukusebenzisa izinsiza zayo ezithuthukile, okuwukumosha.
Abantu abafuna ukuthatha izithombe ukuze bazijabulise noma ngezinjongo eziyisisekelo zansuku zonke: njengokuthatha izithombe zencwadi yonyaka, ikhamera yokuhamba eshibhile, i-backpacking, ukuphuma, ukuthatha izithombe ozishuthe zona,… Ulayini wekhamera othengekayo osuka ezigidini ezingu-1-2 ungaphezu kokwanele ukuwusebenzisa. Imisebenzi yokulungiswa kwe-engeli, ibhalansi yokukhanya, … yonke yakhelwe ngaphakathi, ngezinye izikhathi awukwazi ukuxhaphaza ngokugcwele leyo misebenzi, ngakho-ke ukuthenga ikhamera ephezulu akudingekile.
Indlela yokukhetha ikhamera eshibhile yekhwalithi enhle
Ngisho noma kuyikhamera ethandwayo, kufanele sicabangele izindlela zokukhetha ikhamera engabizi nje kuphela kodwa futhi elungele ukusetshenziswa, ukuze sigweme ukumosha imali nomzamo.
Uhlu olugcwele lwezindlela zokulungisa
Imfuneko okufanele ibe nayo noma iyiphi ikhamera, kungakhathaliseki ukuthi esezingeni eliphezulu noma ephansi iwukuba nohlu olugcwele lwemisebenzi nezindlela zokudubula ngokwezifiso, okunikeza abathwebuli bezithombe ukuguquguquka kokuvumelana nezifiso zabo. Izindlela ezijwayelekile okufanele ube nazo yilezi: imodi yokugxila, i-metering, ukuchayeka, ibhalansi yokukhanya, ibhalansi emhlophe, ukudubula okuzenzakalelayo ngokwendawo, …
Impahla, ingqikithi ikhamera eshibhile
Ikhamera iyisisetshenziswa sikagesi esilinyazwa kalula umthelela onamandla. Ngakho-ke, udinga ukukhetha ngokwakho ikhamera eyenziwe ngezinto eziqinile ezifana nensimbi, enomsebenzi ongenamanzi, okungcono. Lokhu kuzoqinisekisa ukuqina komshini.
Idizayini ikhamera eshibhile
Idizayini ayincikile enanini. Amakhamera amaningi esigabeni esidumile anemiklamo ewubukhazikhazi ngokwedlulele nesimanje. Okumele ukuqaphele ukuthi izingxenye zomshini ziyalingana yini, yinkinobho ukuyicindezela kalula, iyangena yini esandleni. Kudingeka ukuhlola ngokucophelela ukuze uqiniseke ukuthi yonke imisebenzi yokudubula elandelayo iyashesha futhi iyazwela.
Yiziphi izesekeli eziza nekhamera eshibhile?
Imishini yokuthwebula izithombe eshibhile ivama ukufika nenani lezesekeli: imemori khadi (umthamo ophansi), amakesi efoni, amabhethri ashajwa kabusha, amabhande, izintambo zokuxhuma, izincwadi, … Kudingeka uhlole ngokucophelela izesekeli ezitholakalayo. ezifakiwe, bheka ukuthi zikhona yini izesekeli azikho.
Ezinye izinhlobo ezidumile ezisesigabeni esidumile zingashiwo: ICanon, iSony (ebusa zonke izingxenye ezi-3), iFujifilm. Ikakhulukazi, iCanon iyona esetshenziswa kakhulu abasebenzisi ngenxa yezintengo eziningi ongakhetha kuzo.
Amakhamera engxenye evamile anewaranti yezinyanga eziyi-12, iphutha elingu-1 ngephutha elingu-1 onyakeni ongu-1.
Amakhamera ashibhile aphezulu ayi-10 namuhla
1. ICanon PowerShot SX620 – ikhamera engcono kakhulu engaphansi kwezigidi ezi-5
Lena ikhamera yezinga lokungena edume kakhulu eyake yabakhona. Idivayisi inosayizi obanjwa ngesandla, ohlangene. Ukulungiswa okuphezulu: 20MP, inzwa ye-CMOS, i-zoom enkulu yokubona engu-25x yezithombe ezicacile, ezibukhali ngisho nokude. Isivinini esiphezulu se-ISO esingu-3200 sivumela ukwakhiwa kwezithombe ezinhle zeziqhumane ebumnyameni.
Idivayisi iphinde ivumele ukuqoshwa kwamavidiyo ngekhwalithi ye-Full HD kumafreyimu angu-60 / s. Umshini futhi usekela uxhumano lwe-wifi nokuxhumeka kwe-NFC okuvumela ukudlulisa izithombe zisuka kukhamera ziye kumishini kagesi: amafoni, amaphilisi, amalaptop kalula.
BONA INTENGO ENGCONO KAKHULU KU-tiki
Ukwanelisa izidingo eziyisisekelo zokuthatha izithombe, ukuhamba
Ukusondeza okukhulu kwe-optical
Ikhwalithi egcwele yokuqoshwa kwevidiyo ye-HD
Sekela ukuxhumana okungenantambo
Asikho isikrini sokuthinta
Ayibafanele abathwebuli bezithombe abangochwepheshe
Inani: 4,890,000 won
2. Canon PowerShot SX430 . Ikhamera
Ikhamera yeCanon PowerShot SX430 ifakwe isikrini se-LCD ukuze sibuyekezwe kalula isithombe ngemva kokudubula. Isivinini sokuvala esisheshayo esingu-1/4000s sisiza ukuvimbela isithombe ukuthi singavezwa obala uma sithwebula ngaphandle elangeni. Le khamera ebiza kancane ifakwe ubuchwepheshe be-autofocus obusiza ukuthwebula kahle izifundo ezihamba ngokushesha.
Isixazululo esingu-20MP sekhwalithi yesithombe ebukhali, ecacile, ekhanyayo futhi emnyama. Ukusondeza okukhulu kwe-45x kukusiza ukuthi uthwebule wonke uzimele noma ngabe ukuphi. Ungabelana ngezithombe ezithunjiwe ku-youtube noma ezinkundleni zokuxhumana ngosizo lwe-wifi ne-NFC.
BONA INTENGO ENHLE KWA-TIKI
Usayizi omncane futhi okhanyayo
Ikhwalithi yesithombe enhle
Ukusondeza okuhle, inzwa ephezulu
I-Wi-Fi eyakhelwe ngaphakathi, i-NFC
Isibhamu esifiphele ebusuku
Ukudlidliza lapho usondeza kude
Inani: 4,390,000 won
3. Ikhamera yeCanon IXUS 185 – Ikhamera eshibhile ngaphansi kwe-VND eyizigidi ezi-3
ICanon IXUS 185 iyisinqumo esifanele sokuthwebula izithombe ebusuku. Ibanga le-ISO ukusuka ku-100 – 800 lisiza umthwebuli wezithombe ukuthi athole izithombe ezicacile ngisho nasebumnyameni. Ukulungiswa kwe-20MP kusiza ukukhiqiza kabusha izithombe ezicacile, imibala emisha.
Naphezu kokuba umugqa wekhamera oshibhile, imikhiqizo isenezindlela ezihlukahlukene zokudubula: umphumela wephosta, ikhamera yokudlala, i-fisheye, i-miniature, iqhwa, iziqhumane, ukugxila kobuso, … ikunikeza okuhlangenwe nakho okumangalisayo. Ikhamera iphinde ifakwe i-flash ukuze ikhulise ngempumelelo ikhwalithi yezithombe ebumnyameni.
Idizayini ehlangene, kulula ukuyibamba
Imiphumela eminingi eyingqayizivele
Fiphaza lapho usondeza kude
Kunzima ukukhipha nokufaka ibhethri
Inani: 2,190,000 won
4. ICanon IXUS 190. Ikhamera
Ikhamera yeCanon IXUS 190 yokusondeza okungu-10x, ukulungiswa okungu-20MP. Isici esimelene nokuzamazama kule khamera ebiza kancane sisiza ukuthola izithombe ezibukhali usohambeni. Ngaphezu kwalokho, umshini uphinde ufakwe izici eziningi ezithakazelisayo: uxhumano lwe-wifi, uxhumano olungenantambo kumadivayisi we-peripheral, ubuchwepheshe be-autofocus.
Idivayisi ine-flash esiza ukuthatha izithombe ezingcono ebusuku. Izindlela eziningi zokudubula ezifana nalezi: ukukhanya, ukukhanya okuphansi, i-shutter ende, i-portrait, i-monochrome, … izocebisa isitayela sakho sokuklama isithombe.
Umklamo we-Chic, ohlangene
Ukuxhumeka okungenantambo kuyatholakala
Izindlela zokudubula ngokwezifiso eziningi
Ukwanelisa izidingo zokuhamba izithombe
Ibhethri elihlala isikhathi eside
I-Anti-vibration ayikho njengoba kulindelekile
Isithombe esifiphele, asisheleli
Inani: 3,990,000 won
5. I-Fujifilm Instax Mini LiPlay Ikhamera Esheshayo
Lokhu ikhamera ye-fujifilm eshibhile, igxile ekuthwebuleni izithombe ozishuthe yona futhi ingumkhiqizo odayiswa kakhulu we-Fujifilm esigabeni sezithombe ozishuthe sona. I-Fujifilm Instax Mini LiPlay inemibala emi-3: emhlophe, emnyama, ebomvana abasebenzisi abangakhetha kuyo. Isici esivelele kakhulu sedivayisi yikhono lokufaka umculo ezithombeni ngokurekhoda ngenkathi uthwebula.
Ngeke ucabange ngekhamera eshibhile ephethe izihlungi zemibala ezingafika kwezingu-6, amafreyimu anothile angu-30 avumela izithombe zakho zokuma ngobude ukuthi zibe “ezibonakalayo” kunanini ngaphambili. Ngemva kokuthatha isithombe, ungakwazi ukwabelana ngezithombe ngefoni yakho ngoxhumano lwe-bluetooth olwakhelwe ngaphakathi.
Isitayela esinamandla, esisakhula
Izici eziningi eziyingqayizivele
Ukuphrinta kombala okuhle
Ikhwalithi yesithombe ayibukhali
Inani: 3,490,000 won
6. Ikhamera eshibhile yakwaSony DSC W810
I-Sony Camera DSC W810 eshibhile ingumnikazi wethoni yesiliva yakudala enokuchema kwayo kwakudala. Ukusebenzisa inzwa ye-Super HAD CCD kudala izithombe ezingokoqobo kakhulu, ezicacile kuyo yonke imininingwane. Ilensi ebanzi: 26mm, isikrini se-LCD esingu-2.7 sikhiqiza izithombe namavidiyo asezingeni eliphakeme kakhulu anemibala egqamile.
Idivayisi yekhwalithi yevidiyo ye-HD, ngaphandle kwezici: ukubonwa kwezwi, ukurekhoda, ukunganyakazi lapho ihamba. Imbobo ye-USB eyakhelwe ngaphakathi yokuxhuma kumadivayisi axhumene ne-peripheral iphinde ibe iphoyinti lokuhlanganisa lomkhiqizo.
Idizayini yakudala, eyingqayizivele
Izinto zensimbi ezinamandla neziqinile
Intengo eshibhile kakhulu
Umsindo omkhulu lapho uthatha izithombe
Shuthela ngezinjongo eziyisisekelo, ezijwayelekile kuphela
Inani: 1,990,000 won
7. Ikhamera ye-Sony DSC H300
Ikhamera ye-Sony DSC H300 yaziswa kakhulu abasebenzisi ngenxa yokuzwela kwayo ekukhanyeni okuphezulu kanye nokuvimbela ukuphazamiseka okuhle. Ikhamera ye-Sony DSC H300 idlula okulindelwe ngabasebenzisi naphezu kokuthi isesigabeni esithengekayo. Izithombe ezithathwe kukhamera ye-Sony DSC H300 zokukhanya okuphelele, umbala, nekhwalithi yokugqama.
I-35x optical zoom nayo iyisici sedivayisi. Isikrini se-LDC esingu-3.0 intshi sibonisa izithombe ezingokoqobo kakhulu, zibukhali kuwo wonke amaphikseli. Ngohlelo oluhle lwe-autofocus, le khamera ithembisa ukuletha okuhlangenwe nakho okuningi okumangalisayo. Lena ikhamera eshibhile okufanele uyithenge okwamanje!
Ukusondeza okuhle, Akukho ukufiphala uma usondeza kude
Thatha izithombe zabantu abangemuhle
Isithombe asibukhali, umbala awumusha
Intengo: 3,390,000 VND
8. Ikhamera ye-Sony DSC W830
Ikhamera Eshibhile I-Sony DSC W830 inomklamo omusha, onamandla nobuntu kungemuva lesimanje elimnyama. Ukulungiswa okungu-20MP, ukusondeza kwe-8x optical kusiza ukuthwebula ozimele abacacile, abangokoqobo uma ukude. Ubuchwepheshe be-Sony DSC W830 anti-shake baziswa kakhulu ngabasebenzisi.
Idivayisi inesikrini esingu-2.7-intshi se-LDC, esinesici esilungele ukuzibekela isikhathi. Umshini wenza kahle imisebenzi eyisisekelo yekhamera evamile, ikunikeza izikhathi zokucwiliswa emhlabeni wakho wesithombe.
Isibonisi sombala wangempela
Awukho umsebenzi wokukhipha ifonti
Inani: 2,555,000 won
9. I-Sony DSC-WX220 . Ikhamera Yedijithali
Indawo ekhangayo ye-Sony DSC-WX220 Digital Camera iqopha ividiyo enekhwalithi egcwele ye-HD yekhwalithi ye-movie ebushelelezi, ebukhali. Ifakwe inzwa ye-CMOS ukuze unciphise umsindo lapho udubula.
Ikakhulukazi, le divayisi inokusekelwa kokuxhuma okufika koku-3: i-wifi, i-USB, i-HDMI. Ukudluliswa komsindo nevidiyo kusuka emshinini kuya kuzo zonke izinhlobo zamadivayisi angaphandle akusesona isithiyo. Nakuba kuyikhamera eshibhile futhi ethandwayo, umkhiqizo usagunyazwe iminyaka engu-2 kumkhiqizi, ukuze uqiniseke ngekhwalithi.
BONA INTENGO ENGCONO KAKHULU KWA-NGUYEN KIM
Ikhwalithi ye-HD egcwele lapho uqopha amamuvi
Sekela izimbobo zokuxhuma ezi-3
Ububi: Sondeza akukwazi ukuba kude
Intengo: 3,790,000 VND
10. Ikhamera ye-Sony DSC-H400
Njengamamodeli angaphambilini, Ikhamera ye-Sony DSC-H400 iphinde ibe nokulungiswa okungu-20MP ngekhwalithi yesithombe encomekayo. Ibanga eliphezulu le-ISO 3200, indawo yokungena engu-f/6.5 inyusa ukumunca ukukhanya. I-zoom enkulu ye-63x ingathwebula izinto kude kakhulu ngaphandle kokukhathazeka ngokufiphala.
Isivinini se-shutter 1/2000s sisiza ukuthatha izithombe ezinhle ezimeni zokukhanya ezinzima. Ikhamera futhi inezimbobo zokuxhuma ze-bluetooth ezakhelwe ngaphakathi kanye ne-wifi ukuze wabelane kalula ngezithombe kwamanye amadivaysi, ukugwema ukuphakamisa okusindayo.
Yenelisa izidingo zezithombe ezijwayelekile
Ububi: Ikhwalithi yevidiyo ephansi: 720p
Intengo: 4,990,000 VND
Ngenhla kukhona amakhamera ashibhile ayi-10 aphezulu – ikhamera eshibhile Thenga okungcono kakhulu manje. Ngethemba ukuthi uzothola ikhamera ethengekayo ukuze unikeze izidingo zakho.
Xem Thêm Cách mua máy uốn sắt mỹ thuật giá rẻ chính hãng | Muasalebang
Điện thoại Xiaomi Redmi Note 10 | Muasalebang
Cách làm dồi heo ngon ngất ngây tại nhà | Muasalebang